🥇 ▷ Awood GAME awood leh oo leh Xbox One X, Gears of War, Halo iyo Apex ✅
Awood GAME awood leh oo leh Xbox One X, Gears of War, Halo iyo Apex
GAME wuxuu bilaabay awood Xbox One X waxay bixisaa Gears of War, Halo iyo Apex. Si loogu dabaaldego ku soo laabashada dugsiga iyo dhammaadka ciidaha, wax ka fiican oo aan ka ahayn samaynta isbeddelka ama u boodidda ugu dambeysa ee loogu talagalay, waqtigaan, console ugu awoodda badan suuqa. Xbox One X shaki la’aan waa console qumman oo wajihi kara jiilka ugu dambeeya ee jiilka. In kasta oo Xbox Scarlett uu dhow yahay geeska uuna imaan doono sannadka 2020, wali waxaan haysannaa ciyaaro badan oo aan ku raaxeysan karno illaa sannadka soo socda ee Masiixiga. Mana jiraan wax ka wanaagsan oo ay samayn karaan marka loo eego tan weyn Xbox One X waxay bixisaa Gears of War, Halo iyo Apex taas oo ka timaadda silsiladda ciyaarta GAME ee ciyaarta.
Xirmadan waxaa ku jira set oo dhammaystiran oo ah Gears of War 4 oo ah dijital, ciyaarta Halo 5 oo dhammaystiran oo dijital ah iyo 3000 Apex Coins (Lacagta ciyaarta oo qiimihiisu yahay € 30). Dhamaantoodna waxay ku qiimeeyaan qiime qosol ah: € 299.95 halkii ay ahaan lahayd € 499.95 asalka ah. Xirmadan ayaa timid waqti ku habboon, gaar ahaan dadka ku cusub Xbox. Gears 5 ayaa iftiinka arki doona maalmo gudahood. Marka maxaa ka fiican in lagu raaxeysto ciyaartii hore ee qoob-ka-ciyaarkii ugu dambeeyay ee Microsoft.
Dhanka kale, Halo: Infinite wuxuu noqon doonaa cinwaanka “Xbox Scarlett”, sidaa darteed waa waqti aad u fiican in lagu xasuusto taraawiixda mashruucii ugu dambeeyay ee ay soo saartay 343 Warshadaha. Ugu dambayntiina, baakadu waxay ku dhammays tiran tahay 3,000 oo lacagta lacagta ah ee loo yaqaan ‘Apex coins’ ah, taas oo waxtar u yeelan doonta haddii aad si joogto ah uga cayaarto ciyaar-ciyaar bilaash ah. Waqtigan xaadirka ah ma jiro waqti kama dambeys ah oo la bixiyo, laakiin si dhakhso leh ayaad u deg degtaa, maxaa yeelay waxay u badan tahay inay duulaan.